Amaphakheji we-Kashmir Tour
I-Paradise's Own Owner: Jammu & Kashmir
"Izulu emhlabeni" lihloswe ngokucacile ukuchaza indawo ekhangayo yaseNdiya iJammu & Kashmir. I-nestled kahle phakathi kwezintaba zamathafa amahle ase-Himalayas, eKarakoram, naseLadakh. Egcwele izintaba ezinhle zezintaba, ama-glaciers aphefumulayo, isibhakabhaka esibhakabhaka; I-Jammu ne-Kashmir yizo zonke ukuthula komhambi.
Akuyona kuphela i-Jammu ne-Kashmir indawo yokubona, ihlinzeka ngemisebenzi ehlukahlukene yokuzijabulisa. Izitshalo zokugwedla, izindawo ezibi kakhulu, izintaba namagquma anamangalisa nje ngokungaqondakali uma kuziwa ngokuhamba ngezinyawo, ukukhuphuka kwamadwala kanye nemisebenzi yamatende. Izinyanga ezifanele zokuhamba ngomhlaka ngo-Ephreli kuya kuNovemba. Uma imisebenzi yezintaba ingakunaki, kunezinye izinto eziningi umuntu angazama! Imidlalo yokuzijabulisa efana namanzi amhlophe, ama-raving, i-para gliding, i-parailing, ukudoba ama-trout, i-ice skating yizinto ezingabhekana nazo. Imidlalo ngayinye inezikhungo zokuqeqesha ezizimele kanye nabaqeqeshiwe abaqeqeshiwe ukukusiza kuzo zonke izigaba. Izitshalo eziluhlaza okwesibhakabhaka seSrinagar neGulmarg yiPharadesi eliyi-golfer ngempela. Zama futhi ubeke izandla noma ezimbili ngegolide ngenkathi ulapha.
Uma ubheka ukuhamba uhambo lokuhambela kabusha ukuze uphinde uxhumane nomuntu wangaphakathi, ungase ucabange ukufaka u-Vaishno Devi ohlwini lwakho. Uma ufuna ukuhlola uhlangothi lwakho oluhle Leh Ladakhis into engcono kakhulu! Ngaphandle kwalokhu, i-Jammu ne-Kashmir banezindawo ezimbalwa ezincane ezaziwayo ngokulinganayo njengoba ziyaziwa! Hlola amaphakheji ethu futhi uthole ukuthi ikuphi okukufanelayo.
Vakashela kuMaa Vaishnodevi
Iphakheji lokuvakasha le-Srinagar 4 Nights Stay
Srinagar - 5 Nights Hlala
I-Divine Kashmir Pilgrimage Tour
Iphakheji le-Leh Ladakh Tour